Shina, Guatanamo Bay sy Vaovao Hafa · Global Voices teny Malagasy
Shina, Guatanamo Bay sy Vaovao Hafa
Voadika ny 20 Novambra 2017 3:25 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Marsa 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nalaza tamin'ity herinandro ity ny raharaham-paritra sy iraisam-pirenena niaraka tamin'ireo vondrona bilaogera maroloko ao Bahrain sy any ivelany!
Mitondra antsika any Shina, Palestina sy ny Guanatamo Bay, Kiobà i Haitham Sabbah, izay ahitana fanitsakitsahana ny zon'olombelona araka ny nosoratako.
Nosamborin'ny manampahefana tao Shina ny mpiara-miasa aminay sady mpikambana ato amin'ny Global Voices, Hao Wu raha nanatontosa sarimihetsika vaovao momba ny vondrona ara-pivavahana ao Shina. Any Palestina indray, mitohy ny tantara satria maro ireo tsy manan-tsiny namoy ny ainy ary tsy voasazy ireo nahavanon-doza no sady mbola nisy nahazo valisoa aza. Ny nijanonany farany dia tao amin'ny Helodranon'i Guantanamo, Kiobà, izay hitazonan'ny Amerikana an'ireo “mpampihorohoro an'arivony” tsy nandalo fitsarana ary nahazo ambaratonga vaovao indray ny fahafahana sy ny fampijaliana.
Tao amin'ny lahatsoratra roa, Jadd William antsoina hoe Dr Abdul Hadi Khalaf, mamelabelatra ny toe-draharaha any Iràka, voalohany tamin'ny famoahana fanangonan-tsonia avy amin'ireo Irakiana mpila ravinahitra ary avy eo indray sary mampiseho ireo Amerikana niharam-boina tamin'ny ady sy ny fibodoana.
Mandritra izany, Chanad Bahraini mitatitra ny fiharatsian'ny toe-draharaha na dia akaiky ny morontsiraka aza, manasongadina ny revolisionan'ny mpiasa manozongozona an'i Dubai, izay mety hiparitaka any amin'ny firenena hafa ao amin'ny faritra, izay ampiasaina tsy ara-drariny amin'ny fotoana rehetra ny mpiasa vahiny mahantra.
Misintaka lavitra ny tranony ihany koa i Silly Bahraini Gir, mitatitra ny filazan'ny filoha Libiana, Kolonely Muammer Gaddafi farany, izay nanomezany tsiny ny fomba demôkratika ao Andrefana ary mirehareha fa ny fireneny ihany no maodely ho an'ny demokrasia manerantany!
Mikasika ny olana eo an-toerana, Chanad namoaka horonantsary mampihetsi-po mampiseho ny fandresen'i Ian Henderson, fanta-daza ho “Mpandatsa-drà ao Bahrain”, izay tsy noraharahian'ny governemanta na dia teo aza ny fanavaozana vao haingana sy ny fampidirana ny demaokrasia raha nitatitra tamintsika ny famoriana ireo “mpahay siansa” marobe izay niara-nivory tao Bahrain hanandratra ny Mpaminany Mohammed ho Tompondaka kosa i Mahmood Al Yousif. Na dia teo aza ny famandrihana nataony tamin'ny fihaonambe, nahita tara-pahazavana indray i Mahmood, nanambara fa ny vokatra tsara indrindra tamin'ny hetsika dia ny fanatrehan'i Cat Stevens ao amin'ny Fanjakana.
Mitondra antsika mankany amin'ny kolontsaina, ny literatiora ary ny zavakanto izany, izay niresaka tamin'ilay Bahrainita bilaogera sady mpanoratra Ali Al Saeed tamin'ny resadresaka “mafana” ny Cerebral Waste avy ao Boston.
Sahirana ihany koa i Ali tamin'ity herinandro ity, mamaky ireo toko ao amin'ny bokiny Quixotiq tao amin'ny trano fampiratiana ao Bahrain. Tsy nisy olon-kafa ankoatra ny Tooners, izay milaza amintsika momba ny zava-niainany tao.
Tontolo kely tokoa izany!